မို့အစ်ရောင်ရမ်းနေတဲ့ မျက်ခွံအစုံကို မိတ်ကပ်နဲ့ ဖို့ထားခဲ့တယ်...
ဖျားနာနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကတော့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးနဲ့ ကူကယ်ရာရလို့....
ဦးနှောက်ထဲမှာတော့ သူမရဲ့ တန်ကြေးကို တွက်ချက်နေရင်း...
ခမ်းမထဲက လူအုပ်ကြားကနေ ခပ်ဝေးဝေး အပြေးကလေး လှမ်းထွက်...
ခံစားမှုမဲ့စွာ ခမ်းမဆီ ပြန်အလာမှာတော့
သူမရဲ့ နှလုံးသားအစုံကို တနေရာရာမှာ လွှတ်ချထားခဲ့ဟန် ရှိလေရဲ့...
pandora Sun Mar 27, 09:41:00 PM GMT+8
ကဗျာလေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရတယ်.
မောင်လေး Sun Mar 27, 09:42:00 PM GMT+8
ဒီအတိုင်းဆို ဒီသတို့သမီးက ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ သတို့သမီးပေါ့နော်..:)))
Maung Myo Sun Mar 27, 09:54:00 PM GMT+8
သတို့သမီး ယိမ်းနွဲ့လှပအသက်ဝင်နေလိုက်တာ လှတယ် ။
အလင်းရောင် Sun Mar 27, 10:16:00 PM GMT+8
ဘယ်နေရာမှာ လွှတ်ချထားခဲ့တုံး သတို့သမီးရယ်..
ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပဲ မှတ်လိုက်ပါတော့..:)
မိုးယံ Sun Mar 27, 10:35:00 PM GMT+8
အင်း တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ... စာရေးသူနဲ့ စာ ကို ရောထွေးမိတယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မှတ်ချက်ပေးမိတယ်။
လူပျိုရံကျောက် Sun Mar 27, 11:02:00 PM GMT+8
နှုတ်ခမ်းပဲ ကွက်ပြီးဖျားတယ်ဆိုတော့..ဆေးပညာအတွက်အတော်ထူးဆန်းတဲ့ ရောဂါပဲ..နှလုံးသားလဲ တနေရာမှာလွှတ်ချထားခဲ့ တယ်ဆိုတော့..သတို့သမီးက မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ထမင်းချက်ရမှာမို့ ဈေးဝယ်လာခဲ့ပုံပဲ..၊ပန်းစည်းကြီးကလဲ ကိုင်ရသေးဆိုတော့ ဟင်းချက်ဖို့ ဝယ်လာတဲ့ နှလုံးသားကို ကယောင်ကတန်းနဲ့ တနေရာချခဲ့တာ ဖြစ်မှာ..
ဪ.....ဦးနှောက်ကလဲ ဈေးဘိုးတွက်နေရ ရှာသေးသကိုး...
အင်းလေ....လင်ယူမိမှတော့ ဈေးဘိုး အိမ်လခ အသေးသုံးတွေ တွက်ရတော့မှာပေါ့...
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Mar 28, 12:18:00 AM GMT+8
ကြည့်ရတာ သတိုးသမီးက ခမ်းမထဲမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းအကြောင်း စဉ်းစားမိပြီး စိတ်ညစ်သွားတယ်ထင်တယ်...။
Cameron Mon Mar 28, 10:11:00 AM GMT+8
သတိုးသမီးလေးရဲ့ အတွင်းစိတ်မှာ ခံစားနေရတာကို ပုံလေးကနေ မြင်နေရတယ်....။ (တို့မကြီးလိုင်းပြောင်းစပြုနေပြီ)
Vista Mon Mar 28, 02:54:00 PM GMT+8
ကြိုက်လိုက်တာ ပုံလေးရော စာရော
ညီလင်းသစ် Mon Mar 28, 06:33:00 PM GMT+8
Illustration ကလည်း အပျံစား၊ သတို့သမီးခေါင်းမှာ သရဖူလေးတောင် တွေ့လိုက်မိ သလိုလို..၊ မင်္ဂလာဝတ်စုံက လေထဲမှာ အပျံ့ပျံ့ အလွင့်လွင့်နဲ့ တနေရာကို ဆုတ်ကန် ဆုတ်ကန် သွားနေရသလိုမျိုး...၊ ဒီပို့စ်ကတော့ တကယ့်ကိုပဲ2thumbs up...!!!!
ယောနက်သန် Mon Mar 28, 07:47:00 PM GMT+8
ပုံ လေးကြိုက်တယ်။ ပုံဆွဲတော့ င/ဓ နာမည်သုံးတာလား။ :)
ခနွဲ Tue Mar 29, 12:24:00 AM GMT+8
ကဗျာလေးက တိုတိုလေးနဲ့ ထိတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးပေမယ့် အဲလိုဖြစ်ရပ်မျိုးနားလည် ခံစားသွားပါတယ်။
နောင်အင်းလေး Tue Mar 29, 02:13:00 AM GMT+8
တကယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကဗျာတိုလေးပါ ... အမ
... ကဗျာက စာနှစ်ကြောင်းပဲလို့ရှိတယ်လို့မြင်မိတယ် .။
... ဒီစာနှစ်ကြောင်းလေးပဲရှိတဲ့ ကဗျာက ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ပေါ်လွင်စေတယ် ....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Tue Mar 29, 03:45:00 AM GMT+8
အစ်မ အရောင်လေးတွေ အသေးစိတ် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ခြယ်ထားတာ များ လှလိုက်တာ။
ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးက ၀မ်းနည်းစရာရယ်
ညီမလေး Thu Mar 31, 09:16:00 AM GMT+8
ချစ်ချစ် ... ပုံကိုကော စာကိုကော ကြိုက်တယ် သိပ်ထိမိတာပဲ ။ အဲ့လိုတွေများများရေးနော် ...